Xisbiga Waddani oo cambaareeyay amarka xukuumada Somaliland ku dhintay safarada shirkadaha diyaaradaha qaarkood | Dayniile.com
Home Warkii Xisbiga Waddani oo cambaareeyay amarka xukuumada Somaliland ku dhintay safarada shirkadaha diyaaradaha...
Xisbiga Waddani, ayaa xukuumada Somaliland ku eedeyay in ay u dhintay safarada shirkadaha qaarkood sida Flydubai, Airarabia iyo Daallo, si loo naas nuujiyo shirkado kale oo qoyska madaxweyne Biixi wakiil kayahay.
“Waxaanu aaminsanahay in dalkan Dastuurka Somaliland lagu dhaqo, dastuurkuna ganacsiga xor ayuu ka dhigay, Waddani halkaasu taaganyahay. Arrintani waa arrin la xidhiidha tartan, waxaa jira shirkado kale oo qoyska madaxweynuhu ay wakiil ka yihiin, oo aanu qabno in kuwaa loo xaglinayo, arrintaasi oo aanu aad u cambaaraynayno” ayuu yidhi Xamse Khayre.
“Dastuurka Somaliland wuxuu qoyska madaxweynaha ka mamnuucay in ay ku lug yeeshan ganacsi gaar ah, sidaa dastuurku markuu lahaa wuxu ka hadlayay tan oo kale in ay dhici karto wanay dhacday, waxaanu aaminsanahay suuqu in uu xoryahay, in shirkadaha loo daayo suuqa oo ay tartamaan, arrintaasi waxay faa’iido ugu jirtaa dadweynaha Somaliland” ayuu yidhi Xamse Khayre.
Previous articleWAX KA OGOW DOORASHADA TAARIIKHIGA AH EE KA DHACAYSA PUNTLAND
Next articleGolaha Kacdoonka Gobolka Hiiraan iyo Odayaasha dhaqanka Hiiraan oo si kulul uga Jawaab celiyay hadal kasoo yeeray Yuusuf Dabageed
Ciidamada Daalibaan ayaa dhoolatus milateri ku qabtay magaalada Kabul Maanta oo Axad ah iyagoo adeegsanaya gawaarida gaashaaman ee Maraykanku isagacararey iyo diyaaradaha qumaatiga u...
Doorashada labo kursi oo maanta ka dhacaysa Dhuusamareeb